Ngizohlolwa; Ngizozazi Isimo Sami
Ngingomusha oyi-adolesenti, futhi ngiyaya ocansini. Abangani bami banquma ukuyothola amaphilisi okuvika ukukhulelwa, kwaba yindlela yethu yokuzivikela. Ngichaza ukuthi ngangilethemba isoka lami, ngicabanga ukuthi ukwenza ucansi olungavikelekile nalo kuzolivezela ukuthi ngilithanda kangakanani. Ngenkathi siqhubeka senza ucansi ngaphandle kwekhondomu izinyangana ezimbalwa, ngathola ukuthi ngangingeyona yodwa intombi ayezwana nayo. Empeleni wayengethembekile entombini yakhe esebenzisa mina. MAYE UKUSHAQEKA!!
Kwadinga ngiqhubekele phambili nempilo, ngalawula impilo yami, ngahamba ngayohlolelwa i-HIV. Ngathola ukwelulekwa ngaphambi kokuhlolwa, nganquma ngokwempela ukuthi ngifuna ukuzazi isimo sami. Kwadinga ukuba ngilinde imizuzu elishumi nanhlanu ngaphambi kokuba ngithole imiphumela. Leyo mizuzu yaba ngemide kakhulu empilweni yami. Ngenhlahla, umphumela wathi kanginayo i-HIV. Ngase ngelulekwa ngesikhathi esiye sibekhona sewuhloliwe lapho igciwane elisuke lisacashile khona lingabonakali, okudinga ngibuyele ukuyohlolwa emva kwamaviki ambalwa.
Nempela, ngangijabule futhi nginenkululeko ngemiphumela. Futhi kwangivula amehlo ukuthola ukuthi imina kuphela umuntu ONGAZINAKEKELA. Angikaze ngiye ocansini kusukela lapho, nalapho mangase ngishintsha umqondo ngiyohlala ngisebenzisa ikhondomu, ngoba ngiyazi ukuthi ngaphambi kokuba ngethembeke kuzakwethu kufanele ngithembeke kimi kuqala. Njengamanje ngiphila impilo enganayo-iHIV, futhi ngifuna kuhlale kunjalo, nomaukuba ne-HIV kungesona isigwebo sentambo.
Asikwazi ukuzikhethela imindeni yethu, kodwa singazikhethela abangani, sikhethe esingakusho kwabanye nangabanye, esikwenzayo nokuthi nini, nokuthi siya kuphi nokungayi kephi. Lokhu kalula nje kusho ukuthi yithi esizophendula ngesikwenzayo; yithi esithatha izinqumo, ngakho masibe qotho. Siyakhetha sivumela ini, mina ngikhetha ukugxilisa umqondo wami ekufundeni, nasekuhleleleni ikusasa.
UThandeka* 19 iminyaka yobudala
< Back to AMAZWI AKHO